फ्यामिली भिजिट : कोरोना कहर कम भएपछि यी ठाउँ जाने की ! « Lokpath
काठमाडौं । यसपटक दशैँले पहिलेका वर्षजस्तो उल्लास ल्याउन सकेन । गत अंग्रेजी वर्षको अन्तिम साता चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको भनिएको कोरोना भाइरस ‘कोभिड – १९’ का कारण १० औँ महिनासम्म अस्तव्यस्त दैनिकी गुजार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि नेपालीहरु खुलेर चाडवाड मनाउने मूडमा छैनन् । तर हिन्दु नेपालीहरुको महान् चाड बडा दशैँ र यसबीचमा हुने लामो छुट्टीमा उकुसमुकुस भएको मन कतै गएर बहलाउने की ? भनेर धेरै परिवारले स – सानो ‘ट्रिप’ जाने योजना बनाएका छन् ।
हुन त घटनास्थापनादेखि नै दशैँ शुरु हुने भएकाले दशैँमा राम्रो लगाउन र मिठो खाने प्रचलन धेरै अगाडी देखि नै चलिआएको हो ।
अहिले एउटा सिरीज थपिएको छ । त्यो हो, घुमघाम । अझ कोरोनाको कहरले निस्सासीएका मानिसलाई कहिँकतै निस्कन पाए रु भन्ने पनि लागिरहेको छ ।
यसपटक काम र पढाईको सिलसिलामा काठमाण्डौमा बस्नेहरु निकै अघि घर फर्किए । केहि दशैँको मुखमा फर्किए । विदेशमा भएकाहरु भने नियमित उडान नभएका कारण नेपाल आउन पाएनन् । अप्ठेरोमा परेका ८० हजारजति नेपालीलाई भने सरकारले स्वदेश ल्यायो । केहिले नियमित भन्दा चार्टर्ड उडान एकदमै महँगो भएका कारण दशैँ खल्लो भएको अनुभुति गरिरहेका छन् । खैर, नेपालमा हुनेहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर विभिन्न स्थानमा घुम्न निस्कीने योजनामा छन् ।
हुनत पछिल्लो समय दशैँको बिदामा साथीभाइसँग घुम्न जानेहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । दशैँको समयमा धेरै दिन बिदा हुने भएकाले पनि युवाहरुमा घुम्न जाने गरेका छन् । दशैँको बिदामा परिवार तथा साथीभाइसँग घुम्न जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ होला । नेपालमा घुमफिर गरेर रमाइलो गर्नका लागि प्रशस्त ठाउँ छन् । मिलेसम्म दशैँका प्लानमा एउटा यो ठाउँ पनि राख्नुहोस् । जहाँ पुगेर तपाइलाई मानसिक शान्ति र आनन्द मिल्नेछ ।
भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी निकै आकर्षक गन्तव्य हो, घुमफिर र ज्ञान बटुल्नको लागि । लामो यात्राको रुची राख्नेहरुको लागि लुम्बिनी उत्तम हुनसक्छ । शान्तिको लागि छट्पटिएकाहरुले त्यहाँ पुग्छन् ।
लुम्विनी प्रमुख आकर्षण भनेको मायादेवी मन्दिर हो । अत्यन्तै सुन्दर रहेको लुम्बिनीमा विभिन्न देशका कलात्मक गुम्बाहरु रहेका पनि रहेका छन् । त्यहाँका सबै गुम्बाहरु अत्यन्तै सुन्दर भएकाले गुम्बा बनाउन विभिन्न देशहरुबीच प्रतिस्पर्धा भएको आभाष मिल्छ । काठमाडौँबाट भैरहवा विमानस्थल हुँदै लुम्बिनी पुग्न सकिन्छ । वा सडक माध्यम प्रयोग गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ ।
वाईल्ड लाइफ तथा थारू संस्कृति हेर्न रुचि राख्नका लागि चितवनको सौराहा निकै उपयुक्त गन्तव्य हुन्छ । सौराह चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएकाले पनि घुम्नका लागि चर्चित रहेको छ । यहाँको प्रमुख आकर्षण भनेको हात्तीमा जंगल सफारी गर्नु हो । हात्ती तथा जिप सफारी गर्दै बाघ, गैंडा, घडीयाल अवलोकन गर्न पाइन्छ, यहाँ । त्यतिमात्रै होईन प्रकृतिसँग नजिक भएर रमाउन चाहनेको लागि यो सबैभनदा उत्तम विकल्प हो । राप्ती नदीमा बोटिङ गर्दा गोही, गैंडालगायतका जनावर पनि देखिन्छ ।
सौराहा जंगल सफारी, हात्ती सफारी, चरा वाचिङ तथा थारू संस्कृतिका लागि प्रख्यात रहेको छ ।
तनहुँको डुम्रेबाट ८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको बन्दीपुर दशैँको बिदामा घुम्नको लागि अर्को राम्रो ठाँउ हो । पूराना घरहरूलाई कलात्मक रूपमा सिँगारिएको बन्दीपुर तनहुँको पुरानो बजार हो । नेवारी बस्ती र सुन्दर दृश्यले सबैलाई आकर्षीत गर्ने गरेको छ । यहाँबाट तनहुँको सुन्दर फाँटहरू, हिमाललगायतका दृश्यहरू हेर्न पाइन्छ ।
हिमाल पारिको जिल्लाका रुपमा परिचित मुस्ताङ धार्मिक तथा प्राकृतिक रुपमा रमणिय ठाउँ हो । अन्नपूर्ण र धौलागिरी हिमालको छायाँमा रहेको यस जिल्ला चट्टानहरुले बनेको मरुभुमीजस्तै देखिन्छ । उच्च स्थानमा रहेकाले यहाँ दिउँसोको समयमा हावाको वहाव एकदमै तेज हुने गर्दछ । बाह्रै महिना हिउँले ढाकिने हिमालहरुको काखमा रहेको मुस्ताङमा पनि हिउँ पर्ने गर्छ । विशेषतः जाडो महिनामा धेरै हिउँ पर्ने गर्दछ । हिउँमा खेल्न मनपराउनेको लागि भनेर मुस्ताङ उपयुक्त गन्तव्य हुन्छ । मुस्ताङलाई मध्यभाग पारेर बग्ने कालीगण्डकीको आफ्नो छुटै विशेषता रहेको छ । त्यो अति मनमोहक देखिन्छ । मुस्ताङमा रहेको मुक्तिनाथ मन्दिर हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो ।
धनुषा जिल्लामा रहेको रामजानकी मन्दिर नेपालको प्रमुख धार्मीक गन्तव्यका रुपमा मानिन्छ । यहाँ नेपाली तथा भारतीय पर्यटकको ठूलो उपस्थिती हुने गरेको छ । तपाईको संस्कृति, रहनसहन बुझ्न अनि आफ्ना बालबालिकालाई बुझाउन तपाईको लागि यो पनि राम्रो गन्तव्य हुनसक्छ ।
जिरी नेपालको स्वीटजरल्याण्डको नामले प्रख्यात छ । दोलखा जिल्लाको प्रमुख र आकर्षक गन्तव्य हो, जिरी । तामाकोशी नदी, मनमोहक हरियाली र झरना तथा परम्परागत बस्तीले जिरीलाई रमणीय बनाएका छन् । जिरी सगरमाथा प्रवेशद्वारका रुपमा पनि परिचित छ । यहाँबाट सगरमाथाका लागि पदयात्रा सुरु हुन्छ ।
पुनहिल नेपालको मुख्य र सबैभन्दा आकर्षक पदमार्ग घान्द्रुक–घोरेपानी–पुनहिल रहेको छ । पुनहिलमा पुगेर दर्जनौँ हिमश्रृंखला हेर्न सकिने भएकोले उक्त क्षेत्रको भ्रमणमा जाँदा रमाईलो हुन्छ ।
यो ट्रेकिङ गर्ने हरेकले आफै सगरमाथा चढेको अनुभव गनै गरेका छन् । १६ दिन लामो ट्रेकमा सुन्दर लालिगुराँसको जङ्गलहरु, ढुंगाको पर्खाल लगाइएको सुन्दर शेर्पा गाँउहरुमा पुग्न सकिन्छ । शेर्पाहरुको यो भूमिबाट नाम्चे, पोत्र्से गाउँ लगायतका सुन्दर गाउँ हुँदै अगाडी बढ्दा जादुमयी एभरेष्ट र नुप्त्से हिमालहरुको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।
अन्नपूर्ण पदमार्गको यात्रा मनाङ हुँदै थोराङपास गरेर मुक्तिनाथ, जोमसोम, बेनी अथवा घोरेपानीबाट पोखरा पुगेर टुङ्गिन्छ । पदयात्राका सौखिनका लागि यो उपयुक्त गन्तव्यस्थल हो । यो ट्रेकमा १४ दिन बिताउन सकिन्छ ।
अझै युवापुस्ताले बाईकमा पुगेर घुमफिर गर्ने एउटा मुख्य गन्तव्य बनाएका छन् मनाङ र मुस्ताङ । तपाई त्यहाँको यात्रा पनि तय गर्न सक्नुहुन्छ ।
(नोट : विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ‘कोभिड – १९’ बाट बच्न नेपाल सरकारले भिडभाड नगर्न, ठूलो जमघट नगर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न, मास्कको उचित र अनिवार्य प्रयोग गर्न, सेनिटाईजरको प्रयोग गर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ । एकबाट सजिलै दोस्रोमा सर्ने प्रकृतिको भाइरस र यसविरुद्धको भ्याक्सीनको सहज उपलब्धता नभएका कारण विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा आउँदा अनिवार्य पीसीआर गरेको हुनुपर्ने वा नयाँ मानिसलाई प्रवेशमा निषेध गर्ने नीति लिएको हुनसक्छ । यसअर्थ आफू जाने गन्तव्यमा पर्ने स्थानीय सरकारसँग भरपर्दो सूचना लिएर मात्रै जानु राम्रो हुन्छ ।
यहाँहरुको बडादशैँ र यसपछिको घुमघाम रमाईलो गरी बितोस् । लोकपथ डटकमसँगै रहनुहोला ।)